Qaybtii Siddeedaad: Buurtii Foolatay, Bakaylaay Dhashay!
Tuesday June 30, 2020 - 08:45:58 in Articles by Hadhwanaag News
Nabad akhristeyaal. Qaybtan oo noqon doonta,- haddii Ilaahay idmo - guntii iyo gebogebadii qormadii aynnu beryahanba soo wadney ee la magac baxday; Buurtii Foolatay, Ma Bakaylaay Dhashay? kuna saabsanayd shirweynihii Jabuuti loogu qabtay labada dal ee Soomaaliya iyo Somaliland, waxaynnu wax kaga tilmaami doonnaa; sidii shirku ku soo dhammaaday iyo wixii ay qolo waliba kala carrowday.
Haddii aynnu dib u milicsanno, diyaaradihii ay dawladda Jabuuti kala dirtay ee u duulay; Hargeysa iyo Muqdisho - iyadoo weliba lagu jiro xaaladdan adag ee Covid19ka - heerka sare ee madaxtinimo ee ay labada waddanba ka soo boqoolay ee diyaaradaha soo raacay ee salaanta loo qabtay oo kala ahaa: madaxweynayaal, ra'iisal wasaare, madaxdii baarlamaanada labad dal, wasiirro mudan, lataliyayaal iyo aqoonyahanno; waxa la filayey, in ay shirkooda ka soo baxaan go'aamo dhaxalgal ah oo ka mug iyo miisaanba roon shirarkii hore loo wada galay ee sheekada iyo sharaabka ku dhammaan jirey!
Ninkii Cigaal Shiidaad ayaa habeen isaga oo guuraynaya arkay kurtin, markaasuu ka baqday oo uu is yidhi," Waxan aad arkaysaa, haddii uu ugu yar yahay waa libaax.!" Dabadeedna naxdin ayuu halkiisii ku kala qaboobey oo uu ka dhaqaaqi kari waayey! Markii uu waagii beryey ayuu arkay, wixii uu libaaxa moodayey oo kurtin ah! Kaddibna wuxu yidhi, halhayska caan baxay ee ah: ma waxaan ku moodayey, mise waxa aad noqotay, mise ta aan loo noqon doonin ...? Ta aynnu moodeyney waxay ahayd, in madaxdu wax weyn soo saxeexayaan oo ay yihiin buurtii foolatay! Waxase shirka ka soo baxay noqday, wax aan u qalmin baaxaddiisii iyo sidii loo buunbuuniyey. Sidaasi darteedna, waxa ka dhacday; kaaf iyo kala dheeri iyo kamaan filaneyn - waa marka go'aamadiisa lagu qiimeeyo'e!
Dhinaca kale marka laga eego, ma la odhan karaa shirkaas i khasaare ayuu ahaa? Arrintaasi waxay ku xidhan tahay, hadba isha aad ku eegtid iyo dhinaca aad iska taagtid! Waana arrin dabiici ah, in qof waliba si wax arko oo aan Aadamuhu aragtida ku midaysnayn!
Somaliland sir iyo caadba waxay u sheegatay qaddiyadeedii ay muddada la guuxaysey ee madasha u la'ayd
Akhristaha qiimaha lahoow, qormadii aynnu soo qaybqaybinayna halkaasi ayay ku biyoshubatay - waanad mahadsan tahay.